Maxkamad amartay in aan dambi loo raacanin haweenay siddeed carruur ah dishay - BBC News Somali
Maxkamad amartay in aan dambi loo raacanin haweenay siddeed carruur ah dishay
Image caption Askari taagan goobta laga helay maydka siddeeda ilmood
Haweenay reer Australia ah oo mindi ku dishay siddeed carruur ah oo gurigeeda ku sugnaa ayaan wax dambi ah lagu soo oogi doonin sababtoo ah "xiskeedu ma dhanayn" marka ay ficilkaas gaysanaysay.
Raina Thaiday ayaa wajahaysay xanuun dhanka dhimirka ah markii ay gacanteeda ku dishay afar wiil iyo saddex gabdhood oo ay iyadu dhashay iyo gabadh yar oo kale oo ay qaraabo ahaayeen, arrintaasi waxay dhacday sannadkii 2014kii.
Go'aankan ayaa la gaaray bishii hore laakiin hadda ayaa la shaaciyay, arrintaas ayaana ka dhigan in aan wax dambi ah loo raacan karin.
Thaiday oo 40 jir ah ayaa lagu hayaa xarun ammaankeeda aad loo adkeeyay oo ku taalla Brisbane.
Ma cadda in waligeed oo dambe lagu sii dhexdayn doono bulshada dhexdeeda.
Image caption Dilkan ayaa ka yaabiyay bulshada
Image caption Dadkii ka qaybqaatay aaska carruurta
Gurigii lagu dilay carruurta oo da'doodu u dhaxaysay labo ilaa 14 sano ayaa la burburiyay waxaana laga dhigay goob dadwaynaha ka dhaxaysa si loogu xasuusto carruurta oo magacyadoodu kala ahaayeen Malili, Angelina, Shantae, Rayden, Azariah, Daniel, Rodney iyo Patrenella.
Thaiday oo sidoo kalana loo yaqaanno Mersane Warria, ayaa markii hore lagu soo oogay in ay carruur laysay laakiin maxkamadda dadka dhimirka ka xannuunsan ee Queensland ayaa go'aamisay in aan maxkamad la soo taagi karin mar kale.
Khuburadu waxay sheegeen in dilkan ka hor aan haweenaydan laga dawaynin xannuun dhanka dhimirka ah.
Dhakhaatiir xannuunada dhimirka ku takhasusay oo kala duwan ayaase sheegay in ay u badan tahay in xaaladda maskaxeed ee Thaiday uu sii xumaaday bilihii ka horeeyay marka uu dhibku dhacay.